के हुन्छ निदाउनु अघि मोबाइल चलाउँदा ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
के तपाइको सुत्नुअघि मोबाइल चलाउने बानी छ? छ भने यो बानी तत्काल परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
यदि ख्याल गर्नु भएको छैन भने विचार पुर्याउनुस्, सुत्नु अघि यस्ता डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दा शारीरिक र मानसिक दुवै हानी गर्छ। यसले निन्द्रा नलाग्ने र निदाइहाले पनि छोटो निन्द्रा पर्ने अनि बिहान उठ्दा शरिर गह्रौ बनाउने गर्छ।
Previousप्रियंकाको ग्र्यामी लुक्सको चर्चा
Nextतीनवटा ट्रक एकैठाउँमा ठोक्किँदा ३ जनाको मृत्यु, दुई गम्भीर घाइते